Football Khabar » आज बार्सिलोना र बेटिस भिड्दै : जितको बाटोमा फर्किएला बार्सिलोना ?
आज बार्सिलोना र बेटिस भिड्दै : जितको बाटोमा फर्किएला बार्सिलोना ?
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आज राति केही महत्त्वपूर्ण खेलहरू हुँदैछन् । यी खेलमध्ये धेरैको नजर रहने खेल हो– बार्सिलोना र रियल बेटिसको छ । यो खेल बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति ठीक ९ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आज रातिको खेल बार्सिलोनाका लागि लिगको सातौं खेल हुनेछ भने पाहुना टोली रियल बेटिसका लागि नवौं खेल हुनेछ । हाल अंक तालिकामा बार्सिलोना ६ खेल सकिँदा मात्रै ८ अंक बनाएर १२औं स्थानमा छ । यो सिजन खराब सुरुआत गरेको बार्सिलोनाले ६ खेलमध्ये मात्रै २ खेल जितेर २ खेल बराबरी गर्दा २ खेल हारिसकेको छ । रोनाल्ड कोम्यानको कमान्डमा रहेको बार्सिलोनाले सुरुआती ६ खेलको १८ अंकमध्ये १० अंक गुमाएर मात्रै ८ अंक जोडेको छ । उसका लागि यो पछिल्लो १८ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब स्थिति हो ।
यता, ११ अंक बनाएको बेटिसले ८ खेल खेलिसक्दा ४ खेल जितेर ४ खेल नै हारेको छ । हालको अवस्थामा ऊ बार्सिलोनाभन्दा २ खेल बढी खेल्दै ३ अंक बढी जोडेर अंक तालिकामा ५ स्थान माथि छ ।
आज घरेलु मैदान क्याम्प नोउ रंगशालामा पाहुना टोली बेटिसविरुद्ध उत्रिँदा बार्सिलोना चर्को दबाबमा हुनेछ । पछिल्ला ४ खेलमा एक खेल पनि जित्न नसकेको बार्सिलोना आजको खेलबाट जितको बाटोमा फर्किने दाउमा छ । लगातार कमजोर प्रदर्शन र खराब नतिजाका कारण आलोचना खेप्दै आएको बार्सिलोना आज उत्कृष्ट प्रदर्शन र सुविधाजनक नतिजाको खोजीमा हुनेछ ।
बार्सिलोना र बेटिस पछिल्लोपटक गत फेब्रुअरी महिनामा ला लिगामै भिडेका थिए । बेटिसको घरेलु मैदानमा भएको सो खेल बार्सिलोनाले २–३ ले जितेको थियो । त्यसपछि यी दुई टिम आज राति पुनः भिड्न लागेका हुन् ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०८:३३